22. Natthi Paccaya | Dhamma Training Center
Sep 21 st, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော Natthi Paccayo (Absence condition) (PDF ဖိုင်) အား အောက်တွင် ရှိသော Link မှ ဒေါင်းယူနိုင်ပါသည်။ Download...
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော (Absence Condition) PDF file
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော (Absence Condition) PDF file ၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော (Absence Condition) PDF file ...
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော (Absence condition) Natthi Paccaya Paccayaniddeso 22. Natthipaccayoti –...
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော Natti Paccayo (Absence Condition) (2 of 6)
Natthipaccayo Pańhāvāro Kusalo dhammo kusalassa dhammassa natthipaccayena paccayo. Purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ natthipaccayena paccayo. Anulomamh gotrabhussa … anulomamh vodānassa… gotrabhu...
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော Natti Paccayo (Absence Condition) (3 of 6)
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ zawgyi ၄၃၆။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနုလောမံ ဂေါတြဘုဿ။...
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော Natti Paccayo (Absence Condition) (4 of 6)
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ ၄၃၆။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ...
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော Natti Paccayo (Absence Condition) (5 of 6)
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ zawgyi နတ္ထိပစ္စည်းနှင့် အတ္ထိပစ္စည်း နတ္ထိပစ္စယော၌ ‘န’ ဟူသည် မရှိခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ အတ္ထိဟူသည် ရှိခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ရုပ်တရားနှင့် နာမ်တရားတို့ ကျေးဇူးပြုရာတွင် အတ္ထိပစ္စည်းက...
၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော Natti Paccayo (Absence Condition) (6 of 6)
အနန္တရမျိုးဖြစ်သည့် နတ္ထိပစ္စည်း zawgyi နတ္ထိပစ္စည်း၌ ရုပ်တရား မပါဝင်ပေ။ “သမနန္တရနိရုဒ္ဓါ စိတ္တစေတသိကာဓမ္မာ၊ တဆက်တည်းဖြစ်ပြီး ပျက်သွား သော စိတ် စေတသိက် နာမ်တရားတို့သည် ပဋုပ္ပန္နာနံ၊ မိမိတို့ နောက်မှ ဖြစ်ကုန်သော စိတ္တ စေတသိကာနံ ဓမ္မာနံ၊ စိတ် စေတသိက်...